Ukuhanjiswa koomatshini phantsi kweNdlela yoThutho lweZixhobo zoomatshini
Ukuhanjiswa koomatshini kwahlulwe kuthutho lwegiya, uthumelo lwentonga ye-iturbine yokuskrola, ukuhanjiswa kwebhanti, ukuhanjiswa kwekhonkco kunye nololiwe wegiya. 1. Ugqithiso lwegiya Ugqithiso lwegiya yeyona fomu isetyenziswa kakhulu kuthumelo ngoomatshini. Ukuhanjiswa kwayo kuchaneke ngakumbi, ...
Yintoni Umahluko phakathi kwe-Synchronous Belt Drive kunye neChain Drive?
Uthini umahluko phakathi kwe-synchronous belt drive kunye ne-chain drive? Emehlweni abantu abaninzi, kubonakala ngathi akukho mahluko ungako, nto leyo eyimbono ephosakeleyo. Logama nje siqwalasela ngenyameko, siyawubona umahluko. I-synchronous belt drive ineenzuzo ezininzi kune-chain drive. Ungqamaniso...
Iimpawu kunye nokuSetyenziswa kweChain Drive
I-Chain drive yeye-meshing drive enamalungu aphakathi aguqukayo, aneempawu ezithile zokuqhuba igiya kunye nebhanti yokuqhuba. Xa kuthelekiswa negiya drive, ikhonkco lokuqhuba lineemfuno ezisezantsi zokwenziwa kunye nofakelo oluchanekileyo, imeko yoxinzelelo olungcono lwamazinyo e-sprocket, i-bufferin ethile...